सार्वजनिक भयो निर्मला हत्याकाण्डको प्रतिवेदन, यस्तो छ एसपी विष्टको बयन — OnlineDabali
सार्वजनिक भयो निर्मला हत्याकाण्डको प्रतिवेदन, यस्तो छ एसपी विष्टको बयन
Posted on October 7, 2018 by अनलाइन डबली
काठमाडौं । निर्मला पन्तका हत्यारालाई बचाउन खोजेको भन्दै गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखकै राजिनामा माग गर्दै सडक तात्न थालेपछि सरकारले बल्लबल्ल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
हत्या प्रकरणको छानविनका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सह–सचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानविन समितिले ३७ पेज लामो प्रतिवेदन तयार गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा निर्मलाका आमाबुबाका साथै तत्कालिन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टका साथै अन्य प्रहरी अफिसरको बयन समेटिएको छ ।
वयनमा एसपी विष्टले बम दिदीबहिनीको पक्षमा पनि बोेलेका छन् । दुबैमाथि अनुसन्धन भइरहेको हुँदा यसरी अरुको पक्षमा बोेल्ने भन्दा पनि अाफ्नो कुरा राख्नु पर्ने हो तर विष्टले बम दिदीबहिनीको घरमा एउटा बाहेक अरु कुनै केटाहरु नगएको दाबी गरेका छन् ।
त्यसैगरी निर्मलाका छिमेकीका साथै रोशन र बबिता बमको बयन पनि प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको छ ।
एसपी विष्टको बयन
मेरो मोवाईल नं. ९८५८७९०२७० हो । बम दिदीबहिनीलाई प्रारम्भिक सोधपुछ गर्दा कुनै प्रमाण नभएकाले हाजिरी जमानीमा छाडिएको हो ।
मैले जानकरी पाएअनुसार नरेश बम बाहेक अन्य कुनै केटा पनि बम दिदीबहिनीको घरमा गएका छैनन् । अनुसन्धानको टोलीमा प्र.ना.उ. ज्ञानबहादुर सेटी, प्रति जनदिश भट्ट र अनुसन्धान अधिकृतको रुपमा एकिन्द्रबहादुर खड्काको टोली शव भेटिएको स्थानमा गएको थियो ।
आन्दोनल र भिडको कारण मिति २०७५।४।१४ गतेसम्म शव भेटिएको स्थानमा नभएको हुँ । डिकरदेव पन्त इन्टेलिजेन्सको कार्यमा दक्ष भएकाले अनुसन्धान टोलीमा खटाइएको हो । मैले मिति २०७५।५।७ गते गोली चलाउन आदेश दिएको होइन । ८ गते मस.प्र गण मु का धनगढीमा कार्यरत थिए ।
राष्ट्रियता विरोधी सीके राउत पक्राउ
अखिल क्रान्तिकारी काठमाडौं विश्वविद्यालयद्वारा ‘मिनी फेस्टिवल’ को आयोजना